Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
18 May 2021 Roobabkii ka da’ay Soomaaliya oo saameyay ku dhawaad 200,000 oo qof
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa caawa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka duwan kuwii ka jiray labadii habeen ee lasoo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyadoo caawa fiidkii lagu arkayay gawaari ciidan oo aan horay loogu arkin muddooyinkan dambe.
Sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjooge yaal ah ciidamo farabadan ayaa la soo dhoobay isgoysyada Beexaani, Bisha cas, Fagax iyo Sanca. Lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa ciidamada halkaasi la dhigay.
Sidoo kale Isgoysyada Baar-ubax iyo Balaag-sii ayaa iyagana lasoo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa Booliska, isgoysyadan ayey saddex habeen kahor yimaadeen ciidamada iyagoo kusoo dhawaaday fariisimaha cusub ee uu xaafadda Siirkole ka sameystay taliyihii hore ee Ciidanka Booliska Gobolka Benaadir Saada Joon.
Lama oga dhaqdhaqaaqyada caawa laga dareemayo Muqdisho waxa ay salka ku hayaan, waqooyiga Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan ayaa sidaas oo kale lagu soo warramayaa in ay isku dharariyeen aag ballaaran ciidamo uu wato madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwo ka amar qaata Senator Muuse Suudi Yalaxow.
Roobabkii ka da’ay Soomaaliya oo saameyay ku dhawaad 200,000 oo qof
Warar 18 May 2021 10:38
Roobabkii mahiigaanka ahaa ee dhowaan ka da'ay guud ahaan Soomaaliya ayaa saameeyay in ka badan 166,000 oo qof, sida ay sheegtay hay'adda gargaarka u qaabilsan Qaramada Midoobay Isniintii.
Kullane Jiis oo lagu eedeeyay dilka Askari Soomaaliyeed
Warar 18 May 2021 9:13
Kenya oo dib u fasaxeysa duulimaadyada Soomaaliya
Warar 18 May 2021 7:33
Warar 17 May 2021 21:48